कोरोनाको मृ’त्युदरमा नयाँ रेकर्ड, कहाँ कति थपिए संक्रमित ? – ABC NEWS 24
कोरोनाको मृ’त्युदरमा नयाँ रेकर्ड, कहाँ कति थपिए संक्रमित ?
विश्वभर कोरोनाले ज्यान जाने संख्यामा नयाँ रेकर्ड कायम भएको छ । पछिल्लो २४ घण्टामा १० हजार ७ संक्रमितको ज्यान गएको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ । विश्वभर एकैदिन कोरोनाले ज्यान गुमाएको यो संख्या अहिलेसम्मकै उच्च हो ।
एकै दिन १० हजार बढीको ज्यान जाँदा कोरोनाले ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ लाख ८८ हजार ७२२ पुगेको छ । दोस्रो लहरको संक्रमण उच्च भएको युरोपमा मात्रै पछिल्लो २४ घण्टामा ४ हजार ७२८ जनाको निधन भएको छ । युरोपेली मुलुकमा कोरोनाले सबैभन्दा धेरै बेलायतमा ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान गएको छ ।
युरोपमा कोरोनाबाट ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान जाने बेलायत पहिलो देश हो भने विश्वमा पाचौँ हो । हालसम्म अमेरिका, ब्राजिल, भारत र मेक्सिकोमा ५० हजारभन्दा बढीको ज्यान गइसकेको छ । बेलायतमा पछिल्लो २४ घण्टामा ५९५ संक्रमितको ज्यान गएको छ । योसँगै त्यहाँ मृतकको कुल संख्या ५० हजार ३६५ पुगेको छ ।
जाडो मौसमसँग संक्रमितको संख्या बढ्दै जाँदा बेलायत लगायत युरोपभरि नै मृतकको संख्या बढ्दै गएको छ । युरोपमा भने बेलायतपछि इटालीमा सबैभन्दा बढीको ज्यान गएको छ । स्पेनमा मृतकको संख्या ४२ हजार ९५३ पुगेको छ ।
फ्रान्समा ४२ हजार ५३५ र स्पेनमा ४० हजार १०५ जनाको ज्यान गइसकेको छ । संक्रमणको दोस्रो लहरसँग युरोपका अधिकांश देशले प्रतिबन्धका नयाँ नियमहरु जारी गरेका छन् । मृतकको संख्या बढ्न थालेपछि बेलायतका प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनले पछिल्लो समय प्राप्त तथ्याङ्कहरुले खोपको आशा दिलाएको बताएका छन् ।
यस्तै पछिल्लो २४ घण्टामा विश्वभर ६ लाख ३ हजार १३१ संक्रमित थपिएका छन् । योसँगै विश्वभर संक्रमितको संख्या ५ करोड २४ लाख ११ हजार ४५२ पुगेको छ । यसमध्ये ३ करोड ६६ लाख ५५ हजार ११ जना संक्रमण मुक्त भएका छन् ।
पछिल्लो २४ घण्टामा मात्रै २ लाख ६८ हजार ९१८ जना संक्रमणमुक्त भएका छन् । विश्वभर यो समाचार तयार पार्दासम्म सक्रिय संक्रमितको संख्या १ करोड ४४ लाख ६७ हजार ७१९ पुगेको छ । उपचार गराइरहेकामध्ये ९४ हजार ७३९ जना सिकिस्त रहेको वर्ल्डोमिटर्सले जनाएको छ ।
← दुखद खबर: बिहानै भएको सवारी दु’र्घटनामा ३ जनाको मृ’त्यु, एक जना ग’म्भिर घा’इते
कोरोना सङ्क्रमण पछि होम आइसोलेसनमा बसेका श्रीमान श्रीमतीको मृत्यु →